कोरियास्थित नेपाली राजदुतावासलाई मेरो प्रश्न : – Korea Pati
April 16, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियास्थित नेपाली राजदुतावासलाई मेरो प्रश्न :
सउल स्थित नेपाली राजदुताबासको काम , कर्तब्य र अधिकार के के हुन ? यो तलब भत्ता खानको लागिमात्र खडा गरियको भवन हो या यहाँ जनगुनासोको कदरपनी हुन्छ ? यदि आफ्नो जिम्मेवारिप्रती उत्तरदायि हुनुहुन्छ भने हाम्रै रेमिट्यान्सबाट तलब खायर बस्नुभयका कर्मचारिहरुले हामि मजदुरहरुको प्रश्नको जवाफ दिने जमर्को गर्दिनुहोला ।
प्रश्न १:तपाइंहरुलाइ अबगतनै हुनुपर्ने हो कोरियाका अधिकांश कम्पनिहरु शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ भन्ने कुरा । यदि यो कुरा थाहा छ भने म र मजस्ता हजारौं सेवाग्राहिले हाम्रो बिदाको दिन आयर सरल तरिकाले सेवासुबिधा लिन पाउने गरि राजदुताबासको कार्यालयमा शनिबार र आइतबार बाहेक अन्य दिन बिदा दिइने नियम किन बनाउनुहुन्न ? के सबै काम अनलाईन बाटै गर्न सकिने ब्यबस्था भाको होर ? कुनैपनी कार्यको लागि हामि कार्यालयसम्म पुग्नै नपर्ने भाको होर ? राजदुताबास ब्यापारिको लागिमात्र होकि मजदुरको लागिपनि हो ?
प्रश्न २;धेरैजसोको गुनासो सुन्नमा आयकोछ फोननै लाग्दैन लागेपनी उठ्दैन । यो रोग नेपालको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा यथाबतनै छ तर कोरिया जस्तो सेकेण्ड सेकेण्डको महत्व हुने देशमा आयर नेपालकै कर्मचारी जस्तो आलस्यता देखायर हुन्छ ? अलिकती लाजशरम हुन्न ? यदि खाजा खाने समयमा फोन उठाउन सकिन्न भने यति बजेदेखि यति बजेसम्म खाजा खाने समय भनेर किन उल्लेख गर्नुहुन्न ? फोन उठाउने कर्मचारी अपुग भय अरु कर्मचारी किन भर्ती गर्नुहुन्न ? सेवासुबिधा कसरी दिने एकपटक कोरियाको सरकारी कार्यालयमा दिनभरी बसेर हेर्नू र केही सिक्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहें ।
प्रश्न ३; दुताबासको काम नेपाली चाडपर्ब र कोरियाली चाडपर्बको बारेमा जानकारि दिनेमात्र हो ? राहदानी र लाइसेन्स बनाउनेमात्र हो ? यी बाहेक दुताबासले गरेको उल्लेखनिय काम केही छ भने जानकारी पाउंन ? अहिलेसम्म कैयौं नेपालिहरुको कम्पनिभित्र दुर्घटना भैसकेको छ , कैयौं नेपालिले आत्महत्या गरिसकेका छन र कैयौं नेपालिहरुले स्वभाबिक तथा अस्वभाबिक मृत्युबरण गरिसकेका छन । आजसम्म दुताबासले यी सबै दुर्घटनाको कारण केहो ? लापरबाही कसको थियो ? गल्ती कसको थियो ? आदि इत्यादी बारे थापाउनको लागि कहिंकतै चासो देखाउनुभयकोछ ? अस्ति भरखर एक जना युबाको शब नेपाल पठाउन चन्दा संकलन गर्नुपरेको कुरा जानकारी छ कि छैन ? बैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित यस्ता बिषयहरुमा किन उत्तरदायी हुन सक्नुहुन्न ? यदि यो आफ्नो दायित्व भित्र पर्दैन भने सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन किन पहल गर्नुहुन्न ?
प्रश्न ४;यो दुताबास बिदेशी नागरिकको लागिमात्र खडा गरियको होकि आफ्नो देशको नागरिकलाइपनी समेट्दछ । यदि आफ्नो देशको नागरिकलाइपनि सेवासुबिधा दिने उद्देश्य हो भने किन कोरियन सरकारद्वारा प्रकाशित सुचनाहरु जस्ताको तस्तै english वा कोरियन भाषामानै प्रकाशित गरिन्छ ? त्यसलाइ नेपालिमापनी अनुबाद गरेर सबैलाइ सहज हुनेगरी प्रकाशित गर्नेतिर किन ध्यान पुराउंदैन दुताबास ? के दुताबासमा भाषा अनुबादकको कमि भाको हो ? कि सबै डीग्री होल्डरमात्र रोजगारको लागि कोरिया आउने गरेका छन ?
प्रश्न ५; सुचना प्रकाशित गर्दा किन हतार हतारमा छिटो र छोटो तरिकाले लेख्न खोज्नुहुन्छ ? समय बचायर कहाँ पुग्ने योजना छ ? सकेसम्म सबैले बुझ्ने गरि सबैकुरा बिस्तृत रुपमा समेटेर सुचना प्रकाशित गर्नेतर्फ किन सोच्नुहुन्न ?
प्रश्न ६;दुताबासले खास कसको लागि काम गर्छ ? कुनै एक बर्गको लागिमात्र काम गर्ने प्राबधान छ हो ? हो भने नियम सुधारेर ल्याउनुस हैन भने किन आजसम्म eps कामदारहरुलाइ सम्बोधन गर्न सक्नुभयन ? फ्लाइटका मनलाग्दि चर्को भाडादरदेखी लियर यात्रुले बिमानस्थलमा भोग्नुपरेका सास्ती अनि कामदारले कम्पनिभित्र भोग्नुपरेका ज्यादतिदेखी लियर नेपालमा eps passer हरु त्यत्तिकै थन्किनुपरेको पिडासम्म किन देख्नुहुन्न ? सके केही पहल गर्नुस , नसके कमसेकम एउटा बिज्ञप्ति निकालेर सान्त्वना सम्मत दिनुस ।
September 1, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने
April 3, 2020 April 3, 2020 गुरुदत्त न्यौपाने